सहकारीहरुलाई बलियो बनाउन स्थानीय निकायसँग मिलेर काम शुरु गरेका छौं « अर्थबजार – आर्थिक विकासको लागि सञ्चार
सहकारीहरुलाई बलियो बनाउन स्थानीय निकायसँग मिलेर काम शुरु गरेका छौं
३२ श्रावण २०७८, सोमबार ०५:००
संविधानमै तीनखम्बे अर्थनीति अन्तर्गत समेटेर देशको अर्थतन्त्रको बलियो मेरुदण्डको रुपमा लिइएको सहकारी संस्थाहरुले वास्तवमै यतिबेला गर्व गर्न लायक उपलब्धीहरु हाँसिल गरिरहेका छन् । विशेष गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास, स्वालम्भन, सुशासन, स्वरोजगारलगायतका क्षेत्रमा सहकारीहरुले महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु हाँसिल गर्दै गएका छन् ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत विकास, क्षमता अभिवृद्धिलगायतको क्षेत्रमा क्रियाशील नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)ले सहकारीहरुका निम्ती पुलको काम गरिरहेको छ । विगत २० महिना यता विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीले अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाएको छ । यसबीचमा पनि नेफ्स्कुनले सहकारीहरुका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । यसै सिलसिलामा नेफ्स्कूनका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश प्रसाद पोखरेलसँग गरिएको कुराकानी ः
कोरोना महामारीले नेफ्स्कून र यसका सदस्य संघ संस्थाहरुमा कस्तो प्रभाव पर्यो, त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्नुभयो ?
कोरोना महामारीका कारण कस्तो असर देखियो भन्ने विषयमा हामीले अध्ययन त गरिएन । कोरोना महामारीको समयमा तरलताको अवस्था कस्तो छ भने सदस्यहरुसँग जानकारी लियौ । पहिलो चरणको लकडाउनको बेलामा सदस्यहरुले पैसा निकाल्ने गरेका कारण केही टाइट भएको थियो । त्यो बेलामा सदस्यहरु सहकारी खुल्ने हो की नखुल्ने हो भनेर पैसा निकाल्ने तर्फ लाग्नु भएको थियो । पछिल्लो समयमा तरलता धेरै टाइट भएन । लकडाउनको समयमा ऋण लगानी केही घट्यो । त्यो बेला व्यापार व्यवसाय न्यून भएका कारण ऋण प्रवाहमा संकुचन देखिएको हो ।
यो बेलामा पछिल्लो समयमा बचत केही बढन थाल्यो । भाका नाघेको ऋणको विषयमा सहकारी विभागले निर्देशन जारी गर्यो । यो अवधिमा लाग्ने हर्जना शुल्क छुट हुने भनियो । त्यसले भाका नाघेको ऋण बढ्यो । त्यो अवधिमा करिब १५ प्रतिशत जति भाका नाघेको ऋण देखियो । यो अवधिमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या हुने, कर्मचारी निकाल्नुपर्ने खालको समस्या देखिएन ।
स्थिरिकणकोष कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि केही चुनौती देखिएका छन् । यो ऐनमा भएको विषय भएपनि यसको विषयमा हामीले धेरै सदस्यलाई बुझाउन नसकेको हो की जस्तो लागेको छ । यसको कार्यान्वयनमा तदारुकताका साथ लाग्न पनि सकिएन ।
केही समय अघि हामीले सहकारी विभागलाई ऋण सुरक्षण कोष राख्ने, लेखापरिक्षण गर्ने, साधारणसभा गर्ने, नियमन निकायलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने विषयमा हामीले सुझाव पठाएको छौं । निषेधाज्ञा नखुलेसम्म साधारण सभाको गणपुरक संख्या घटाउनुपर्छ की ? भर्चुअल रुपमा गर्ने हो की ? लेखापरीक्षण विद्युतीय माध्यमबाट प्रमाणिकरण गर्ने विषयमा, साधारण सभा सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा विषयमा सुझावसहितको सिफारिस पठाएका छौं । यो अवधिमा हामीले सहकारीलाई विजनेश कन्टिन्यूटी योजनामा पनि काम गरेका छौ ।
जोखिममा आधारित कार्यक्रममा ४ सय ४१ वटा सस्ंथाहरु आबद्ध रहेका छन् । हामीले आधारशिला भन्ने नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेका छाैँ । यो भनेको निम्न स्तरमा रहेका सहकारीहरुलाई बलियो बनाउनको लागि स्थानीय निकायसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं । स्थिरिकरण कोषमा १५५ वटा संस्थाबाट ५ करोड ४० लाख भन्दा बढी रकम संकलन भएको छ ।
नेफ्स्कूनको सिईओ हुनु भएको एक वर्ष भयो, यो अवधिमा कस्ता उपलब्धिहरु हासिल गर्न सकियो ?
कोरोना महमारीका धेरै कामहरु गर्न सकिएन् । यो अवधिमा विभिन्न संघ संस्थाहरुमा भौतिक रुपमा पुग्न सकिएन । भौतिक रुपमा गएको जस्तो अन्य माध्यमबाट नहुने रहेछ । जसले गर्दा कतिपय सेवाहरु प्रभावकारी हुन सकेनन् । यो अवधिमा मैले देखेको ठूलो चुनौतीमा प्रविधि नै हो । हामीले प्रविधिलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
हामी प्रविधिमा बलियो थियौ भनेर अफसाइड सुपरभिजन पनि राम्रोसँग गर्न सकिने थियो । एमआई सिस्टम राम्रोसँग अपडेट थियो भने सदस्यको सूचना पनि राम्रोसँग अध्यावधिक गर्न सकिने थियो ।
यो चुनौतीको विषय बन्यो । अर्को भनेको स्थिरिकणकोष कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि केही चुनौती देखिएका छन् । यो ऐनमा भएको विषय भएपनि यसको विषयमा हामीले धेरै सदस्यलाई बुझाउन नसकेको हो की जस्तो लागेको छ । यसको कार्यान्वयनमा तदारुकताका साथ लाग्न पनि सकिएन ।
हामीले यो अवधिमा खोज र अनुसन्धानको विषयमा केही काम गर्न सकेनौं । यो विषय सहकारी क्षेत्रमा केही कम पनि रहेको छ । यसलाई बढाउन आवश्यक छ ।
अहिले ऐन अनुसार विशिष्टिकृत संघहरु आएका छन् । यो पनि केही चुनौतीको रुपमा आएको छ । साकोसहरुको पैसा असुरक्षित तरिकाले लगानी हुने हो की ? भन्ने खालको आशंका पैदा भएको छ । यसमा हामीले सर्कुलर जारी गरेका छौं । ऐनमा भएको कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकरणको विषय कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै अहिलेको चुनौती हो ।
तपाईंले संचालक समिति, व्यवस्थापनबाट काम गर्न कत्तिको चुनौती महशुस गर्नुभएको छ ?
यहाँ अभियानबाट पनि आएका व्यक्तिहरु छन् । उहाँहरुको आफ्नो मिसन पनि हुन्छ । उहाँहरुको मिसन एक भएपनि संस्थाको मिसन एक खालको हुन्छ । त्यो दुवै मिसनलाई पुलको काम गर्नुपर्छ । अभियान र संस्थाको मिसनको फरकले गर्दा केही समस्या देखिने भएपनि छलफल, अन्तरक्रियाले गर्दा संस्थाको हितको लागि संस्थागत मिसनमा व्यवस्थापन, संचालकहरु आउनु पर्छ । व्यवस्थापनको तर्फबाट मलाई सबै कुरामा सहयोग छ ।
नेफ्स्कुनमा आबद्ध भएका संघ संस्थालाई प्रविधिमैत्री बनाउन बनाउने काम भइरहेको छ ?
यो बिषय हामीले पञ्च बर्षिय रणनीतिक योजनामा पनि राखेका छौं । साथै हामीले सरकारी ऐन कानुन, मन्त्रालयबाट जारी भएको नियम कानून, सहकारी विभागको निर्देशन, कार्यविधि पालना गर्दै अघि बढने काम भएको छ । अनसाइट रिपोर्टको लागि जान नसके पनि अफ साइट रिपोर्टको लागि आईटीलाई अघि बढाउनु पर्छ । यसले आवश्यक सहयोग गर्न सकिन्छ । बचत तथा ऋण सहकारीहरु सहकारीमा राम्रो नै मानिन्छ । यसको हिस्सा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसको लागि छुट्टै ऐन चाहिन्छ भनेर लागिएको छ । त्यो भयो भने निमयन, सहजीरणको काम पनि सजिलो हुन्छ । यो भयो भने सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । सहकारी क्षेत्र प्रविधिमैत्री हुनु आजको आवश्यकता हो ।
नेफ्स्कून–साकोस म्यानेजर्स क्लबले के गरिरहेको छ अहिले र भविश्यमा यसको आवश्यकता कत्तिको देख्नु भएको छ ?
नेफ्स्कूनले बर्षेनी नेपालभरका म्यानेजरहरुबाट उत्कृष्ट म्यानेजर घोषणा गर्ने गरेको छ । उक्त म्यानेजरले यो क्लबको समन्वय गर्ने गर्नु भएको छ । यसले साकोस अभियानमा कार्यरतको मानव संसाधन म्यानेजर्सहरु र यसको नवीनतम विषय, साकोसको प्रबर्धनमा काम गर्ने गरेको छ । साथै विशेषज्ञको रुपमा काम गर्ने गरेको छ । अझ भनौ थिंक ट्याङकको रुपमा, नीतिगत काममा, नयाँ नयाँ इनोभेसनको रुपमा, बजारमा आएका नयाँ आयामलाई एक्सचेञ्ज गर्ने विषयमा काम गर्ने गरेको छ ।
अभियान र संस्थाको मिसनको फरकले गर्दा केही समस्या देखिने भएपनि छलफल, अन्तरक्रियाले गर्दा संस्थाको हितको लागि संस्थागत मिसनमा व्यवस्थापन, संचालकहरु आउनु पर्छ ।
साकोसमा रहेको व्यवस्थापनको क्षमता बढाउनको लागि, कार्य सम्पादन, योगदानका विषयमा सहयोग गर्न आएको हो । यसमा विज्ञ समूह नै आबद्ध हुन्छन । उत्कृष्ट सहकारी निर्माणको लागि काम गर्ने गरिरहनु भएको छ । सन्दर्भ ब्याजदर, कर्जा सूचना केन्द्र, विशिष्टिकृत संघ, सुरक्षण कोष लगायतका अभियानमा हुने नयाँ नयाँ विषयमा छलफल गर्ने र निचोड निकालेर नेफ्स्कुन र अभियानलाई दिने काम गरेको छ ।
नेफ्स्कून र सहकारी बैंकबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कुराहरु बाहिर आउने गरेका छन् ? किन यस्तो भइरहेको छ ?
यी दुवै संस्थाको चाहाना भनेको सहकारी अभियानलाई सहजिकरण गर्ने, प्रभावकारी बनाउने नै हो । यो बीचमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढेको, एउटाले ऋण नदिए अर्कोले दिने, अर्कोले नदिए अर्कोले दिने खालको रहेको देखियो । व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो हो । तर अस्वथ्य प्रतिस्पर्धा हुनु नराम्रो हो ।
व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा हुँदा सेवाग्राहीले राम्रो सेवा पाउने अवसर सृजना हुन्छ । अवश्य, प्रतिस्पर्धा हुँदा भाका नाघेको ऋण बढ्ने, समयमा भुक्तानी नहुने, सदस्यतामा दोहोरोपना आउने, खराब कर्जामा हिट हुने खालका समस्या आउनसक्छन । यसको लागि नेफ्स्कुन र सहकारी बैंक स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ ।
कतिपय कामहरु नेफ्स्कुनबाट बैंकले पनि फलो गरेको छ । नेफ्स्कुनले गरेको काम बैंकले गर्दा दोहोरोपना आउने गर्दछ । बैंकसँग बचत तथा ऋण सहकारी मात्रै छैनन् । त्यहाँ कृषि, बहुउद्देश्यीय सहकारी पनि रहेका छन् । नेफ्स्कुनले बचत तथा ऋण सहकारीमा गरेको काममा चै डुप्लिकेशन भएको हो की भनेर यसलाई व्यवस्थापन गर्न सहकार्यको लागि एउटा सहमति पनि भएको छ । समस्या भएको बेला एकिकृत रुपमा अघि बढने गरिएको छ ।
कोरोनाको समयमा तलरता कोष स्थापना गरेर सदस्यले फाइदा लिनुभयो । सहकारी अभियानलाई राम्रो बनाउन नै यो सहकार्य भएको हो ।
प्रकाशित : ३२ श्रावण २०७८, सोमबार ०५:००